အောက်စီဂျင်မရလည်းမကြောက်ပါနဲ့၊ကျေးဇူးပြု၍ ဖတ်ပေးပါ - Myanmar Red News
ကိုဗစ်ဒဏ်ကိုသူကိုယ်တိုင်ရော ခံစားဖူးပြီး ခုထိ သူကုပေးနေတဲ့ လူနာများစွာရှိတဲ့ သူငယ်ချင်းဆရာဝန်ရေးထားတာလေးပါ။အောက်ဆီဂျင်ပြတ်လပ်မှု နှင့် COVID ကပ်ရောဂါ
ဆရာဝန်တစ်ဦးအနေနှင့်၎င်း , အဆုတ်ရောဂါ အပြင်းအထန်ခံစားခဲ့ဖူးသော အတွေ့အကြုံရှိသည့် လူတစ်ဦးအနေနှင့်၎င်း …ကိုယ်တိုင်ဖြတ်သန်းခဲ့သော အမောဖောက်ခြင်း ဝေဒနာကို သက်သာစေမည့် နည်းလမ်းများကို ဒုက္ခခံစားနေသောပြည်သူများဒုက္ခသက်သာစေရန် ဝေမျှခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ယခုလတ်တလော COVID -19 ရောဂါကြောင့် အမောဖေါက်ပီးအောက်စီဂျင်မရကြသောလူနာများအတွက် ရည်ရွယ်ပါသည်။ဇွန်လမှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံတွင် COVID တတိယလှိင်း စတင်ဝင် ရောက်ပါသည်။စစ်တပ်မှတိုင်းပြည်အာဏာကို မတရားသိမ်းပိုက်ထားသဖြင့် ပြည်သူလူထုမှာ အားကိုးရမည့်အစိုးရတစ်ရပ်မရှိဘဲကိုယ်ထူကိုယ်ထ စနစ်ဖြင့် ကပ်ရောဂါကို ရင်ဆိုင်နေရပါသည်။
အောက်စီဂျင်လည်းမရှိ ၊ ဆေးရုံလည်း တက်လို အရမ်းခက် တာကြောင့်အိမ်မှာ မောရင်း သေဆုံးကြရတဲ့ လူနာတွေ …… လျော့ကျစေရန် အလိုငှါ စေတနာဖြင့် ဤစာကို ရေးသားအပ်ပါတယ်။ပထမဆုံး အသိပေးလိုသည်မှာ COVID ရောဂါဖြစ်သူတိုင်း Oxygen မလိုပါ။ ရောဂါဖြစ်သူအားလုံး၏ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းသာ oxygen လိုအပ်ပါသည်။
ဒုတိယ အသိပေးလိုသည်မှာ COVID ရောဂါဖြစ်သူတိုင်းမသေပါ။ လူနာစုစုပေါင်း၏ ၂ ရာခိုင်နှုန်းသာ သေဆုံးပါသည်။အမောဖောက်လူနာအားပြုစုဖိုအောက်ပါအချက်များကိုနားလည်ထားရပါမည်။အမောဖောက်ခြင်းသည် အကြောင်း ၂ ချက်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
A. ခန္ဓာကိုယ်သို oxygen ပံ့ပိုးမှုနည်းသွားခြင်း
B.ခန္ဓာကိုယ်မှ oxygen ကို အသုံးပြုမှုများသဖြင့် oxygen မလုံလောက်ခြင်း
A. ခန္ဓာကိုယ်သို oxygen ပံ့ပိုးမှုများလာအောင်လုပ်ဆောင်ရပါမည်။
B. ခန္ဓာကိုယ်မှ oxygen သုံးစွဲမှု တတ်နိုင်သမျှလျှော့ကျအောင်ပြုလုပ်ရပါမည်။
Oxygen ပံ့ပိုးမှုနည်းသွားခြင်း ကို ကုစားရန်နည်းလမ်းများ
အဆုတ်မကောင်းလျှင်သော်လည်းကောင်း နှလုံးမကောင်းလျှင်သော်လည်းကောင်းသွေးအားနည်းလျှင်သော်လည်းကောင်း ခန္ဓာကိုယ်သို Oxygen ပံ့ပိုနည်းသွားတတ်ပါသည်။SpO2 90% အောက်ရောက်လျှင် oxygen ရှုရပါမည်။ယခု မြန်မာနိုင်ငံ သားများကြုတွေ့နေရသည့် အခြေအနေအရ Oxygen မရရှိပါက
အောက်ပါကိစ္စများကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်အား Oxygen ပံ့ပိုးမှု ပိုများလာအောင် ပြုလုပ်ပါ။
၁။ လူနာကို လေကောင်းလေသန့် ရသည့်နေရာတွင်ထားပါ
၂။ အဆုတ်ထဲ လေဝင်အောင် ဂရုတစိုက် သတိထားပီး ဖြေးဖြေးချင်းရှုပါ။
အသက်ကိုဖြေးဖြေးနှင့်ရှည်ရှည်ရှုပါ။အသက်ရှုရာတွင် မြန်မြန်ရှုလေပိုမောလေဖြစ်တတ်ပါသည်။ဖြေးဖြေးနှင့်မှန်မှန်ရှုရန်လိုအပ်ပါသည်။ အသက်ရှုခြင်းသည် အဆုတ်ထဲသို လေဝင်အောင်လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။အကြိမ်ရေများများနှင့် တိုတိုရှုခြင်းထက် အကြိမ်ရေနည်းနည်းနှင့် ရှည်ရှည်ရှုခြင်းက အဆုတ်ထဲလေပိုဝင်ပါသည်။ သတိထားပီး အသက်ရှုရပါမည်။
လေကိုဖြေးဖြေးနှင့် ရှည်ရှည်ရှုခြင်းက respiratory muscle များအသုံးပြုမှုကို လျော့ကျစေပါသည်။ လူပိုသက်သာပါသည်၃။ လူနာအနီးတွင် ဆူညံသံများကို မပြုလုပ်ပါနှင့်၊ အသက်ရှုခြင်း တစ်ခုထဲကိုသာအာရုံစိုက်ရန် လူနာကို သတိပေးပါ။
၄။ ပက်လက်အနေအထားဖြင့် အသက်ရှုခြင်းသည် ပို၍ မောပါသည်( ထိုင်ပီးမှောက်လျှက်အနေအထားဖြင့် နေပါ)၅။ လူနာ စိတ်အေးလက်အေးဖြစ်နေပါစေ( ကြောက်လန့်တကြားဖြစ်ပီး လူနာရုန်းကန်ပါက အခြေအနေကို ပိုမိုဆိုးဝါးစေပါသည်။ထိုကြောင့် ကြုံလာသည့် ပြဿနာကို စိတ်အေးအေးထားပီးရင်ဆိုင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။)
၆။ အခန်းအပူချိန်ကို မပူလွန်း မအေးလွန်းဖြစ်နေဖိုလိုပါသည်။(26’C သည် လူအတွက်အကောင်းဆုံးအပူချိန်ဖြစ်သည် )
ရ။ လူနာရှိသောအခန်းအား ပြူတင်းပေါက်များဖွင့်ထားပါ။
၈။ လူနာအနီးတွင် တတ်နိုင်သမျှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေပါစေ
၉။ အနံ့အသက်များ မရှိပါစေနှင့်
( ညှော်နံ့, ခြင်ဆေးခွေနံ့, မြောင်းပုပ်နံ့, ရေမွေးနံ့ , ဟင်းနံ့ များ သည် အမောဖောက်လူနာအားပိုဆိုးစေပါသည်)၁၀။ အသက်ရှုလမ်းကြောင်းတွင် ချွဲ သလိပ်များ ပိတ်ဆိုနေပါက လက်ဖြင့်ဖြစ်စေ , Suction Machine ဖြင့်ဖြစ်စေ ဖယ်ရှားပေးပါ။
ခန္ဓာကိုယ်မှ Oxygen သုံးစွဲမှုများပြားခြင်းကို လျော့ချရန်
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တွင် Oxygen အများဆုံးအသုံးပြုသည့် ကိုယ်အင်္ဂါများမှာ ဦးနှောက်, နှလုံးနှင့်ကြွက်သားများဖြစ်ကြပါသည်။
ဦးနှောက်နှင့် နှလုံး တို သည် oxygen ပြတ်၍မရပါ။သဘာဝအရ ၎င်းအင်္ဂါများတွင် Oxygen နည်းလာပါက နှလုံးခုံမြန်လာပါမည်၊အသက်ရှုမြန်လာပါမည်၊ စိုးရိမ်စိတ်ဝင်လာတတ်ပါသည်။၎င်းအခြေနေတွင် ခန္ဓာကိုယ်မှ Oxygen သုံးစွဲမှုနည်းအောင် အောက်ပါ ကိစ္စများပြုလုပ်ပါ။
၁။ စိတ်အေးအေးထားပါ ၊ စိတ်မပူရန် အရေးကြီးပါသည်၊ မကြောက်ပါနှင့်
( စိတ်အေးချမ်းအောင်နေခြင်းသည် နှလုံးနှင့် ဦးနှောက် Oxygen သုံးစွဲမှုများစွာလျော့ကျစေပါသည်)
( အာနာပါန တရားအားထုတ်ဖူးသူများ ကိုယ်တွေ့သိပါသည်)
၂။လူနာသည် တတ်နိုင်သမျှ ငြိမ်ငြိမ်နေရပါမည်။
လှုပ်ရှားလေ ကြွက်သားများ oxygen ပိုသုံးလေ ပိုမောလေ ဖြစ်ပါသည်။ထိုကြောင့်ငြိမ်ငြိမ်နေပါ။၃။ သက်တောင့်သက်သာ အဖြစ်ဆုံးအနေအထားဖြင့်နေပါ။အဝတ်အစားကိုချောင်ချောင်လယ်လယ်ရှိသောချည်သား ဝတ်ဆင်ပါ။
၅။ လူနာကို အားပေးစကားပြောပါ။
၆။ စိတ်ရှုပ်စရာများမတွေးပါနှင့်၊ စိတ်ငြိမ်အောင် ဘုရားစာတစ်မျိုးရွတ်နေလိုရပါသည်,
အသက်ရှုတာကိုဘဲအာရုံစိုက်ပါ။ “ငါဒီအခက်အခဲကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမည်” “ကျော်ဖြတ်နိုင်ရမည်” ဟုအကြိမ်ကြိမ်ရွတ်ပါ။ရ။ လူနာအနီးအသံဆူညံခြင်းမဖြစ်အောင် ဂရုစိုက်ပါ။ဆူညံခြင်းကြောင့် စိတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်ပါသည်။ စိတ်မတည်ငြိမ်လျှင် ပိုမောပါသည်။
၈ ။ ချောင်းဆိုးချင်လာပါက အတတ်နိုင်ဆုံး အားမသုံးပါနှင့် အသာအယာ ဆိုးပါ။
၉ ။ လူနာအသက်ရှု မြန်လာပါက ဖြေးဖြေးနှင့် ရှည်ရှည်ရှုဖို ဘေးမှသတိပေးပါ။
မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံး ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေကြရသည့် အခြေအနေဆိုးများမှ အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေ…🙏🙏🙏
ခြေစွယ်ငုတ်နေသူများ မနာမကျင်ပဲ နောက်ထပ် ခြေစွယ်မငုတ်တော့မည့် နည်းလမ်းကောင်း
ကျန်းမာရေးအတွက် အံ့မခန်းအစွမ်းတွေပေးနိုင်မယ့် ကြက်သွန်နီရဲ့ ကောင်းကျိုးများ